Cutter dizitaly multi-asa tsara indrindra - Mpanamboatra andian-tsarimihetsika B4 | Ameida
1.Infrared sensing system, 360 ° manodidina ny fiarovana mba hiantohana ny fiarovana ny mpandraharaha.
2.Ny rafitra fakan-tsarimihetsika fakantsary tanteraka, ny fanohanana ● na ny marika etc. sns, manatsara ny fahombiazan'ny asa.
3.Ny sehatra tantely tantely marokoroko dia misy vokany suction tsara, miantoka fa fisaka ilay lampihazo ary tsy simba aorian'ny fampiasana maharitra.
4. Rafitra fampitaovana mora azo, mifanaraka amin'ny fitaovana andiany Ameida B rehetra.
5.Ny rafitra fahana manohitra fanamainana sy mihodina, ny famahanana sy ny fanapahana tanteraka ao anatin'ny 5 segondra; ataovy tonga saina ny milina fanapahana mandeha ho azy.
6.Ny rindrambaiko fanovana sy famolavolana CAD mahery, asa tonga lafatra miaraka amin'ny CorelDraw, Adobe mpana sary, Onyx, Caldera, PrintFactory, lozisialy MainTop sns.; Ary tohano ny famakiana baoritra amin'ny fisorohana ny mpandraharaha mandefa rakitra diso fanapahana, manatsara ny fahombiazan'ny asa.
7.Ny rafitra famolavolana ny masontsivana dia afaka manitsy ny masontsivana fanapahana tsara indrindra arakaraka ny fitaovana samihafa mba hahazoana antoka fa marina tsara ny fanapahana tsirairay.
8.Ny firafitry ny rafitra ankapobeny, noforonin'ireo injeniera zokiny indrindra amin'ny indostria, tsotra, milamina, mora apetraka sy entina.
9.Acturate rafitra fametrahana fitaovana, mora ampiasaina, dia afaka mifehy tsara ny halalin'ny antsy ary manitatra ny fotoana fampiasana ny tsihy.
10.Salam-pifandraisana siantifika sy tsotra ary famolavolana boribory chassis, milamina sy azo antoka; miaraka amin'ny interface interface fitaovana rehetra hanohanana ny fanavaozana manaraka; mora apetraka sy fikojakojana.
Mekanisme anti-collision ara-batana + infrared induction anti-collision mba hiantohana ny fiarovana ny famokarana
Rafitra servo fanaraha-maso nomerika manan-tsaina
3KW ~ 12KW (azo ovaina ny paompy rivotra matetika)
Teo aloha: Multi-Materials Digital Cutter - B1 Series
Manaraka: Ekipa fonosana ara-toekarena - Series B4L
Digital Cut Cutter
Cutter nomerika nomerika
Fanontana nomerika nomerika sy mpanapaka
Cutter Digital Cutter
Cutter nomerika haingam-pandeha